KORAAYA YAANYADA XILLIGA JIILAALKA EE DAAQADA EE AQALKA: MIYUU SUURTAGAL NOQON KARAA IN LAGU BEERO YAANYADA GUDAHA GURIGA IYO NOOCYADA, SIDA LOO DARYEELO LOOLA DAGAALLAMO CAYAYAANKA, TALOOYIN KU SAABSAN BILOWGA - BEER CAGAARAN
Guryaha ee aqalka: yaanyada sii kordhaya daaqada jiilaalka
Hadda waxaan iibsan karnaa khudaarta cusub iyo miraha waqti kasta oo sanadka ah. Laakiin dhibaatadu waxay tahay in dhadhanka iyo qiimaha alaabtu aysan isku mid ahayn.
Sidaa darteed, bannaanka u badan door bidaan si ay u koraan yaanyada ee guryahooda. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad hesho dalag cusub oo beereed leh oo beereed leh sanadka oo dhan.
Maqaalkani wuxuu eegayaa sida loo beero yaanyada guriga iyo waxa loo baahan yahay arrintan, iyo sidoo kale barashada sida loo soo saaro loona hakiyo yaanyada.
Faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka sii kordhaya daaqada qolka qolka
Ma heli karaa yaanyo yaryar guriga? Heerkan marxaladda horumarinta ee taranta oo ah noocyo kala duwan oo loogu talagalay koritaanka guriga xilliga jiilaalka. Xitaa Fiisooyinka A layaab leh waxay awoodi doonaan in ay koraan dalagga wanaagsan ee yaanyada on windowsill uu.
Faa'iidooyinka beeraha noocan oo kale ah waa in la helo yaanyada caafimaadka leh xilliga jiilaalka. Fiisooyinka Fududeeyaha wuxuu kalsooni ku qabaa in dalaggiisa uu noqdo mid degan deegaanka. Tayada sifaha ee yaanyada waxay noqon doontaa mid la mid ah tan ka mid ah goosashada xagaaga ka soo jeeda furan.
Waa in sidoo kale la yiraahdaa qiimaha tamaandhada laga soo saaro xayawaanka daaqada ayaa noqon doona wax ka yar kuwa kuwa iibsanaya dukaanka.
Faa'iidooyinka ay beerto tamaandhada ee aqal kiro ah waa xaqiiqda ah inaysan marwalba suurtagal ahayn inay kobcaan yaanyada. A marmarka qaarkood waxay noqon kartaa mid aad u yar, sababtoo ah waxa beerista noocan oo kale ah waxay noqon kartaa mid aan macquul ahayn.
Maxay noqoneysaa meesha?
Tamaandho waa dalag cagaaran. Sidaa darteed, waxa ugu wanaagsan in la siiyo doorbididda dhinaca koonfureed ee qolka. Haddii aanay suurtagal ahayn in la yareeyo yaanyada qaybta koonfureed, markaa waa inaad daryeeshaa iftiin dheeraad ah. Xasuusnow in maalinta iftiinka ee yaanyada ay kudhacayaan ugu yaraan 12-13 saacadood. Sida iftiin macmal, waxaad isticmaali kartaa nalalka dhaadheer, nalalka dhaadheer, iyo nalalka tamarta. Hadda waxaa jira fitolampy gaar ah. Nalalka dheeraadka ah waa in lagu dhajiyaa dhererka 25-30 sentimitir dhirta.
Sida heerkulka hawada, waa in lagu hayaa heer heerar ah 22-24 heerka Celsius. Habeenkii, heerkulka waxaa lagu dhimi karaa + 16-18 digrii. Haddii hawada la diiriyo, way yartahay tamaandhada. Iyo iyada oo dhaqanka hawada kulul ee kulul ayaa bilaabay inuu qalalo. Haddii qolku aad u kulul yahay, waa in aad qolka hawada ka sii dheeraato, inaad ka fogaato qoraalada.
Hubi in hawada qolka uu ku filan yahay qoyaan. Kama saari kartid weelasha leh yaanyada meel u dhow qalabka kuleylka, sababtoo ah waxay yihiin hawo qallalan oo dhirta lafteeda. Waxaa ugu wanaagsan in la dhigo weel biyo leh oo ku xiga tamaandhada, taas oo u adeegi doonta nadaafadda nadaafadda.
Noocyo gaar ah xilliga qaboobaha
Si goosashada wanaagsan, marka hore dooro kala duwanaanta saxda ah. si aad u degto. Maadaama noocyada kala duwan aysan ku habooneyn in lagu koro guriga. Dooro duurka sare ama dhexdhexaad ah. Way fiicantahay haddii ay kuwani yihiin yaanyo yaryar ah, maxaa yeelay waa noocyada noocaas ah oo si fudud u badbaadi kara la'aanta iftiinka iyo kuleylka, sidoo kale waxa uu leeyahay muddooyin dhaadheer oo gaaban. Waxaa jira noocyo badan oo loogu talagalay beerista guriga. Kuwa ugu caansan waa kuwa soo socda:
Pearl jaalaha ah.
Maxay tahay dheriga?
Si ay u koraan geedo xilliga qaboobaha xilliga qaboobaha, koobabka caag ah ee caadiga ah waxay ku haboonaan doonaan, taas oo aad u baahan tahay inaad ka dhigto godadka dheecaanka. Laakiin dheeraad ah oo koobab peat special ku haboon. Sida ugu dhakhsaha badan geedo diyaar u ah soo qaado, waa in loo wareejiyo dheriyo, mugga kaas oo ah 7-10 litir. Qalabka dheriga ah ayaa si gaar ah muhiim u ah. Suuroob iyo balaastik, iyo dhoobo, iyo dhoobada.
Ciidda waxaa laga iibsan karaa diyaarinta dukaanka, adigana waad isku diyaarin kartaa. Si arrintan loo sameeyo, waxaynu qaadanaa ciidda, humus, ciidda webiga iyo peat. Qaybaha waxaa lagu qaataa tirooyinka soo socda: 5: 5: 2: 1.
10 litir oo substrate kasta ah waxaad u baahan tahay in aad ku darto yar HOL (aan ka badnayn khaanadaha). Isla isla sidaas waxaad u baahan tahay inaad qaadato iyo sulfate potassium, iyo sidoo kale qaado oo qoryo qoryo. Dhammaan qaybaha ayaa si fiican loo isku qasan yahay kuna kala firdhay weelasha.
Tilmaamaha tallaabo tallaabo ah oo loogu talagalay soo degidda daaqadaha
Caawimaad! Ka hor inta beero, abuurka waa in lagu qoyay korriin koritaanka. Haddii kale waxaa jira khatar ah in abuurka ma baabbi'in doonaa.
A substrate ah ayaa lagu shubaa weelka lagu beeray, ka dibna abuur ayaa la dhigayaa halkaa, kaas oo lagu daboolay yar yar (qiyaastii 10 mm) lakabka ciidda.
Nadiifi ciidda laga bilaabo falejada si aan miraha aan loo dhaqmin. Biyaha waraabka waa in la kala soocaa inkastoo 2-3 maalmood.
Kadib markaad isku furto koobabka waxaa la dhigaa meel quruxsan iyo meel kulul.
Muraayadaha waxaa lagu dabooli karaa folooraha ka hor caleemaha ugu horeeya.
Ka dib 7 maalmood, caleemaha ugu horeeya ayaa soo bixi doona. Waxay u baahan yihiin in la furo maalin kasta si adag, iyo 3-4 maalmood ka dib si looga saaro filimka gebi ahaanba.
Koritaanka geedo waxay u baahan yihiin in la waraabiyo 4-5 maalmood. Guga looma baahna buufin.
Boorashyada quuska waxay noqon karaan oo kaliya marka ay soo baxaan ugu yaraan 4 caleemo.
Ka hor intaanan hawshaan, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso weelasha. Tani:
Iyada ayaa ku habboon lakabka dufanka. Waxaa laga sameyn karaa boodh ama jeex yar. Dheriga ayaa si buuxda loogu daboolay substrate. Dhexdhexaadka dheriga waxaad u baahan tahay inaad niyad jebiso, taasoo si fiican u qoyan.
Fasaxyada waxaa laga waraabiyaa xididada waxaana loo wareejiyaa ubaxyo diyaarsan. Mar labaad la waraabiyo. Carrabkuna wax yar ayuu isfahamayaa.
Waa muhiim! Fiisooyinka Fikradaha ah kuma talinayaan inay beeraan laba dheriyo oo hal dheri ah. Ma siin doonaan goosashada wanaagsan ama xitaa u dhintaan.
Dhirarka ku riday meel fiican oo iftiin leh. Weelasha ayaa laba jeer loo rogay maalintii si ay dhirtu si haboon u kobciso.
Sida loo daryeelo guriga xilliga jiilaalka: talaabo talaabo talaabo ah
Waraabinta iyo bacriminta
Cabbirka miro iyo dhadhankiisa ayaa ku tiirsan nidaamka qoyaanka ee habboon ee ciidda. Ciidda waa in ay mar walba qoyaan. Waa muhiim in laga hortago qalajinta dhamaystiran ee substrate ah.sababtoo ah waxay u horseedi kartaa inay hoos u dhigto yaanyada. Si kastaba ha ahaatee, waxaa haboon in la xasuusto in qoyaan xad-dhaaf ah ay u horseedi karto burburka nidaamka xididka.
Maadaama aysan jirin meel ku filan oo loogu talagalay horumarinta buuxda ee nidaamka xididka ee dheryihii, xididdada ayaa u baahan in la quudiyo koritaanka. Quudinta koowaad waa in la sameeyaa toddoba cisho ka dib markii la qaado geedo. Inta badan, Fiisooyinka ayaa isticmaala daroogooyinka soo socda: Mortar, Nitrofaska iyo Aquarin. Bacriminta waxaa lagu dabaqaa saddex jeer maalintii, sababtoo ah ma jirto meel macdanta macdanta ah.
Laga bilaabo quudinta saddexaad, diirada ee Bacriminta wax yar ka kor.
Xoqitaanka iyo xoqidda
Yaanyada u janjeeri u baahan yihiin, tan iyo xilli sii kordhaya. Sida ugu dhakhsaha badan marka miraha ugu horeeya ay bilaabaan inay ku xirtaan yaanyada, waxaad u baahan tahay inaad ka saarto dusha sare ee yaanyada laba caleemo ka sareeya burushii ugu dambaysay. Tani waa in la sameeyaa oo keliya iyada oo leh qalab fiican oo laysku qurxiyey oo la jimicsiga.
Beeralayda khibraduhu waxay ku talinayaan in ay ka baxaan asalka aan ka badneyn labo tallaabo - waxaad u baahan tahay inaad ka takhalusto dhammaan dadka kale, sababtoo ah waxay qaadan doonaan dhammaan nafaqooyinka.
Goobta ugu habboon ee nidaamyadani waa subaxa hore ama fiidkii ka dib qorrax dhaca. Saliidu waxay u baahan tahay in lagu kariyo ash ama ash. Pr ee waxtarka saxda ah ee yaanyada ku siin doonaa goosashada hodan ah.
Foor iyo laalaab
Inta badan loogu talagalay isticmaalka sii kordhaya ee guryaha. Buugani wuxuu awood u leeyahay in uu hor istaago ilaa laba kg miro. Sidaa darteed, looma baahna qalabka. Laakiin nidaamkani waa lagama maarmaan maxaa yeelay inta badan waa dheriga carrada oo aan adkeyn karin miisaanka midhaha iyo dib u dhicida.
Ugu horreyn waxaad u baahan tahay inaad doorato meel ku haboon oo aad dhejisid. Waa hagaag, haddii dherigu uu istaago meel derbi ama daaqad, oo ku tiirsanaan doonta baadiyaha oo dhan.
Kadibna waxaad u baahan tahay inaad dhirta qoryaha u sameyso dheriyo (mid ka mid ah taageerid baadiyaha).
Burbur ayaa ku xiran aaladda - waa in la sameeyaa sida ugu macquulsan.
Cudurada iyo cayayaanka, sida looga hortago
Cudurrada ugu badani waa kuwa soo socda:
Dheecaan danbe. Xaaladdan oo kale, dhibco brown muuqan on tamaandhada, taas oo kordhaya waqti ka dib. Waxaad la dagaalami kartaa tincture of toon. Moobeylka waxaa la sameeyaa dhowr jeer iyada oo u dhaxaysa 5 maalmood.
Fusarium ayaa la rabaa. Waxaa lagu gartaa jeexjeexin iyo jaalaha ah calaamadaha caleenta hoose. Waqti ka dib, caleemaha kale waxay bilaabaan inay huruud noqdaan. Si aad uga takhalusto cudurkan, waxaad u baahan tahay inaad daaweyso dhirta leh diyaarinta Barrier ama Hom. Ka dib markaa, waa muhiim in la daboolo dhulka inta badan ee suurtogalka ah.
Alternaria Ciriiri caarado yar yar oo eegaya niyadjab. Waxay la dagaallamaan cudurkan iyadoo la adeegsanayo daawooyinka sida Antracol, Consento, Tattu.
Aynu soo wacno cayayaanka ee yaanyada.
Whitefly. Cayayaanka Tani waxay sababa huruuda caleemaha, oo dhawaan la garaaco madow. Si aad ula macaamilato daroogada loo yaqaan 'whitefly' konfidor '.
Slugs Cun caleemaha iyo miraha. Dhirta ay saameeyeen waxay bilaabaan inay qudhaan. Wixii ka hortagga slugs, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daweeyo ciid leh xal xal ah, boodhka tubaakada ama lime.
Caarada caarada Waxay u eegtaa yaanyada qaabka dhibco yaryar. Sucks juuska ka soo geedka, taas oo keenaysa dhimasho. Waxay ka caawin doontaa tincture of toon ama lowska. Waxaad ku dari kartaa saabuunta saabuunta xalka.
Medvedka. Isku day cayayaanka waaweyn oo dhererkiisu gaaro 5 sentimitir. Waxay saameysaa nidaamka asaasiga ah ee geedka. Dagaalka waxaa lagu fuliyaa iyadoo la isticmaalayo tincture of basbaas qadhaadh ama khal.
Si ay u koraan yaanyada aqalka ku yaalla xilliga qaboobaha waa suurtagal. Oo ma aha wax adag. Sidaa darteed, haddii aad rabto in aad haysato yaanyadaada korniinka ah ee xilliga jiilaalka, waxaad u baahan tahay inaad sameyso dadaal yar oo waqti go'an. Waxyaabaha ugu muhiimsan - rabitaan kaliya.